Kenya oo muddo saddex bilood ah ku kordhisay Bandowgii xilliga... | Universal Somali TV
Kenya oo muddo saddex bilood ah ku kordhisay Bandowgii xilliga habeenkii saarnaa Gobolka Waqooyi Bari
December 28 2016 06:59:49
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in wali ay taagan Khatarta Al-Shabaab kaga imaan karta dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya , islamarkaana ay qasab noqotay in la kordhiyo bandowgii Saarnaa Magaalooyin ka tirsan gobolka Waqooyi Bari.
Wasiirka Arimaha Gudaha Kenya Joseph Nkaissary ayaa warbaahinta u sheegay in Bandowgii Sarnaa Mandera iyo sidoo kale degaanada hoos yimaada la kordhiyay oo la gaarsiiyay ilaa iyo 28 ka March ee Sanadka 2017.
Deegaanada uu Bandowgu sii saarnaan doono ayaa kala ah Mandheera, Cumar Jilo, Carabia,Fino, Lafey katulo, iyo Ceel Waaq.
Deegaanada dowladda Kenya ay sheegtay in Bandowga lagu sii kordhiyay ayaa looga baahan yahay dadka ku nool in ay guryahooda ku xaroodaan 6:30 Maqribnimo Waxaana ay banaanka u soo bixi karaan 6:30 Subaxnimo.
Xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee dalka ayaa sheegaya in shacabka kunool degaanadaasi uu cuuryaamiyay Bandowga , islamarkaana uu hoos u dhacay dhaqaalahooda.
Kan-xigaMadaxweyne Xasan oo sheegay dalka inu...
Kan-horeQarax gaari lagu soo xiray oo saaka k...
DABAGALKA WARARKA 23 06 2018
WARKA UNIVERSALTV 23 06 2018
WARKA UNIVERSALTV 22 06 2018
FAALIYAHA QARANKA 23 06 2018
34,195,790 unique visits